January 14, 2015 - Written by Puntland Fox
Magaalada Gaalkacyo oo xarun u ah gobolka Mudug taarikh dheer oo isboortisna ku leh dhulka Soomaalida waxaa soo gaaray ciyaartooydii hore ee kubadda kolayga Soomaaliyeed,Maxamed Modoobe iyo Cabdirisaaq Marayaare,halkaaso si weyn loogu soo dhaweeyay.
Gobolka Mudug xilligaan waxaa uu ka mid yahay goobaha ay ka tir tirmeen tartamada iyo ciyaaraha kolayga,waana sababta ay xilligaan ujoogan ciyaaryahanadii hore oo ka mid ahaa raggi ugu fir fircoona kobadda kolayga Soomaaliyeed.
“Soo laabashada ciyaartooyda kubadda kolayga Soomaaliyeed waxaa ay horseed u noqon doonta taariikhdii isboortis ee Puntland,waana ku faraxsanahay xilli ay jirtay baahibadan inay noo yimaadan,iyagoo meelo fog ka yimid,”ayuu yiri Cabdiqani Khaliif Carabay oo garoonka diyaaraha Gaalkacyo ku soo dhaweeyay.
Labadan ciyaar-yahan waxaa sidoo kale ku soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo,maamulka isboortiska gobolka Mudug oo u hoggaaminayay guddoomiyaha isboortiska gobolka Mudug iyo guddoomiyaha xiriirka kubadda kolayga gobolka Mudug.
“Waxaa jirta baahi-badan oo loo qabo kubadda kolayga,Puntland kama jiraan tar tamo kubadda kolayga ah iyo garoomaba ina taba inad nala aragtaan mihiim bay noo tahay,”ayuu yiri guddoomiyaha kubadda kolayga gobolka Mudug,Cabdixakiin.
Guddoomiyaha isboortiska gobolka Mudug,Cabdi-hodon Dayax-leef ayaa dhankiisa warbixin ka siiyay xaaladda isboortis ee gobolka Mudug,waxuuna sheegay inaysan jirin gooromo kubadda kolayga ah oo ku yaalla gobolka Mudug.
Maxamed Modoobe oo ka mid ahaa ciyaartoyda kubadda kolayga Soomaaliyeed ee soo gaaray Puntland ayaa ugu horreeyn sheegay in sababta keentay xilligaan dalka inay ku soo laabtan inay ugu horreeyso inay soo nooleeyan kubadda kolayga ee Puntland.
“Markan aragnay baa’ba kubadda kolayga Puntland,waxaa ay nugu qasabtay inan dalka ku soo laabano si an u horumarino,waana mida an howlaheena iyo carruurteenaba an uga soo tagnay si an dalka iyo dadkaba wax ugu qabano,”ayuu yiri Madoobe.
Cabdirisaaq Marayaare ayaa isna sheegay inay tagi doonan dhammaanba gobollada Puntland,iyagoo dadaal ku bixinaya soo celinta waayihii kubadda kolayga Puntland.
“Ma jirto cid nugu taageeraysa inan ka shaqeyno soo nooleynta kubadda kolayga,waxaan dooneyna inan ku dhiiri-galino dadka aqoonta u leh kubadda kolayga dalka inay ku soo noqdaan,waan tageyna gobollada oo dhan,”ayuu yiri Marayaare.
Waxaa ay tageen garoomo loogu tala-galay kubadda kolayga kuwaas oo u ka muuqdo bur bur xooggan,iyagoona ballan-qaaday inay dayactiri doonan mid ka mid ah garoomada kolayga Gaalkacyo si loo soo celiyo tar tamada kolayga.
Ugu dambeyn,waxaa ay baaq u direen bahda isboortiska iyo jaaliyadda Puntaland,waxaana ay fareen inay taageero ku bixiyaan horumarinta isboortiska si dhallinyarada noola jeediyo dhibaatooyinka la soo gudboonaada.
Tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ma jirin tar tamo ka dhacay Puntland,gaar ahaana kubadda kolayga